परिवारनै अस्पताल भएको बेला घरमा एक्लै रहेकी जयालाइ अचानक के भयो ? तनावमा बच्चन परिवार – News Np Online
मुख्य पृष्ठ /News/परिवारनै अस्पताल भएको बेला घरमा एक्लै रहेकी जयालाइ अचानक के भयो ? तनावमा बच्चन परिवार
BREAKING NEWS::फेरि नेपाल बन्द घोषणा ! माघ 10 गतेसम्म यस्तो हुँदै देशमा.
राष्ट्र’पति’लाई बो’ल्न मस्क्ले छे’केको हो? चौ’रमा बसेर बदम छो’डाउने है,सिय’त छै’न राष्ट्प’तिको